माछापुच्छ्रे बैंकमा कुन पदका कर्मचारीको कति कमाइ ? हेर्नुहोस् ! यस्तो छ विवरण — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > माछापुच्छ्रे बैंकमा कुन पदका कर्मचारीको कति कमाइ ? हेर्नुहोस् ! यस्तो छ विवरण
माछापुच्छ्रे बैंकमा कुन पदका कर्मचारीको कति कमाइ ? हेर्नुहोस् ! यस्तो छ विवरण
काठमाडौं । जागिर खानेका लागि बैंकको जागिर आकर्षक जागिर हो । वित्तीय क्षेत्रमा कामको चाप अत्यधिक भए पनि करिअरका दृष्टिले राम्रो मानिन्छ ।
बैंकमा जागिर खाने र बैंकर बन्ने चाहना धेरैको हुन्छ । त्यसैले पनि होला, पछिल्लो समय व्यवस्थाप संकाय अध्ययन गर्ने र यसै क्षेत्रमा करिअर बनाउने चाह हुनेहरुको संख्या ठूलो छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकमा जागिर खाँदा कुन तहमा कति तलबरभत्ता हुन्छ भन्ने जानकारी दिने प्रयास गरेको छ । बैंकमा सबैभनदा ठूलो कार्यकारी पद हो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) । माछापुच्छ्रे बैंकमा सुमनप्रसाद शर्मा सीइओ छन।
गत वर्ष उनले बैंकबाट १ करोड २३ लाख रुपैयाँ तलबरभत्ता तथा सेवा सुविधा र बोनस बापत लिएका छन् । मासिकरुपमा हेर्दा सीइओ शर्माले बैंकबाट १० लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझ्छन।
यो सबै पैसा उनले आफ्नो खल्तीमा हाल्दैनन् । आफ्नो कमाइको ३६ प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्छन् । र, कर तिरेपछि बचेको रकम मात्रै उनले घर लान पाउँछन ।
बैंकमा चिफ म्यानेजर पदमा काम गर्ने कर्मचारीको बेसिक स्यालरी १ लाख २७ हजार रुपैयाँ हो । तर, अलाउन्स, ग्रेड र महंगी भत्ता समेत गरी चिफ म्यानेजरले मासिक मासिक २ लाख १२ हजार रुपैयाँ पाउँछन । यसमा बोनस भने जोडिएको छैन ।
समग्रमा बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई बेसिक स्यालरीको ६ महिना बराबरको बोनस खुवाउँदै आएको छ । जसअनुसार सिनियर म्यानेजर पदमा काम गर्ने कर्मचारीले एक वर्षमा साढे ७ लाख रुपैयाँ बोसन पाउँछन् । जसअनुसार सिनियर म्यानेजरका लागि बैंकले एक वर्षमा ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्छ ।
त्यस्तै, सिनियर म्यानेजर पदमा कार्यरत कर्मचारीले बैंकबाट तलबरभत्ता गरी मासिक १ लाख ६८ हजार पाउँछन् । सिनियर म्यानेजरको बेसिक स्यालरी ९७ हजार रुपैयाँ हो । जसअनुसार यो पदमा कार्यरत कर्मचारीले एक वर्षमा ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बोनस पाउँछन् । जसअनुसार बैंकले सिनियर म्यानेजरका लागि एक वर्षमा २६ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ ।
जुनियर असिस्टेन्ट तहका कर्मचारीले मासिकरुपमा तलबरभत्ता गरी ३० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यो तहका कर्मचारीको बेसिक स्यालरी १५ हजार ७९० रुपैयाँ हो । बेसिक स्यालरीमा ६ महिनाको बोनस समेत जोड्दा जुनियर असिस्टेन्ट तहका कर्मचारीका लागि बैंकले एक वर्षमा ४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ ।
त्यस्तै, जुनियर तहका पियन, म्यासेन्जर र गार्डले बैंकबाट २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलबरभत्ता तथा सबै सेवा सुविधाबापत रकम बुझ्छन् । यो तहका कर्मचारीको बेसिक स्यालरी १२ हजार ८८० रुपैयाँ हो । बेसिक स्यालरीमा ६ महिनाको बोनस समेत जोड्दा यो तहका कर्मचारीका लागि बैंकले एक वर्षमा ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ ।
बैंकले गत वर्ष तलबरभत्ता तथा सेवा सुविधा र बोनस सहित गरी कर्मचारीहरुका लागि १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकमा २०७६ सालको असार मसान्तसम्ममा ११ सय ९५ जना कर्मचारी कार्यरत थिए भने २०७५ असार मसान्तमा ९५३ जना कर्मचारी कार्यरत थिए ।
बैंकले पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कन्चनपुर साथै हिमाल देखि पहाड र तराई गरी सातै प्रदेशमा आफ्ना १४० वटा शाखाहरु र १३० शाखारहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी २७० स्थानवाट ७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सुबिधा प्रदान गरिरहेको छ । देशभर बैंकका १६२ वटा एटीएमहरु संचालनमा छन। समाचार स्रोत: क्लिकमाण्डू
२०७६ कार्तिक २० गते १५:०३ मा प्रकाशित
एभरेष्ट बैंकको एटिएम बन्द हुने !
निर्वाचन आयोगले तोक्यो खर्च सीमा, उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने ?
डिडिसीले ल्यायो चियाका लागि छुट्टै ‘टी मिल्क’ !
७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ५० लाख इकाई नेप्सेमा सुचिकृत
अबदेखि कृषकले पेन्सन पाउने !
हालै एफपीओमा लगानी गर्नुभएको थियो ? पाउँदै हुनुहुन्छ १५% हकप्रद,जान्नुहोस् !